I-China Sanitary Cam Rotor Pump QZ-Z Umkhiqizi kanye Nomphakeli | Qiangzhong
Ama-Rotor pumps enzelwe ukuhambisa ngobumnene i-high-viscosity noma okokusebenza okuqukethe i-pellet
Kusebenza kuzikhathi ezinempilo nezinyumba.Ijubane leTransport liyakwazi ukuguquguquka, kodwa futhi namaphampu wamamitha.
Flow calculation Sanitary rotor pump flow 1 .Ukugeleza kwethiyori
Ukugeleza kwethiyori kubhekisa kumthamo wento ehanjiswa ngesikhathi esisodwa ngenkathi kusebenza ipompo ye-sanor rotor ngaphandle kokucabanga ngokulahleka kokuvuza, okungukuthi:
Ukugeleza kwethiyori = ukufuduka X isivinini X isikhathi 2. Ukugeleza kwangempela
Izinga lokugeleza langempela lisho ukuthi iphampu ye-sanororor pump ibheka ukulahleka kokuvuza ngesikhathi sokusebenza, okungukuthi, ukusebenza kahle kwe-volumetric. Ukusebenza kahle kwe-volumetric kuphakathi kuka-80% no-90%.
Ukugeleza kwangempela = ukugeleza kwethiyori X ukusebenza kahle komthamo
Iphampu ye-Butterfly Rotor:
Ngenxa ye-butterfly rotor, inezinzuzo ezithile ekudluliseni izinto ze-viscosity ephezulu nezinto zokwakha eziqukethe izinhlayiya ezinkulu, futhi ingahambisa ngempumelelo izinto ezibukeka kahle.
I-Single Butterfly Lwalugobile Pump Pump:
Iphampu lenzelwe ngokukhethekile ukuthuthwa kwezinhlayiya ezinkulu eziqukethe izinto zokwakha. Isimo sayo esihlukile nefomu eligobile likwenza kube ukuphakama okungenakuqhathaniswa kwamanye amaphampu lapho kuthuthwa izinto ezinkulu zezinhlayiyana. Ingakugwema ngempumelelo ukwehlukana kwezinhlayiyana ngesikhathi senqubo yokudlulisa izinto, futhi iyiphampu ekhethwayo yokudlulisa izinto eziyimbudumbudu.
Ukukhethwa Kwesigaba Sokudlulisa:
• I-Motor + Fixed Ratio Reducer: le ndlela yokudlulisa ilula, isivinini se-rotor sihlala njalo, futhi esinquma ukuthi isilinganiso sokugeleza asilungiseki.
• Uhlobo lweMotor + Mechanical Friction Transless Transmission: lolu hlobo lokudlulisa lulungiswa ngesandla ukufeza isivinini esiguqukayo. Ibonakala nge-torque ephephile nethembekile, enkulu, ukugeleza okungaguquguquki okungenazinyathelo. Okubi ukulungiswa okungezona okuzenzakalelayo futhi okunzima kakhulu. Ijubane kufanele lilungiswe ngenkathi kusetshenzwa, futhi akumele lilungiswe ngaphansi kwesimo sokuma. Sicela ubheke kumiyalo yomkhiqizi yokusetshenziswa nokugcinwa kokucaciswa.
• I-Converter Motor + Converter: isivinini singalungiswa ngokuzenzakalela ngale ndlela, okusho ukuthi ukugeleza kungalungiswa ngaphandle kwesinyathelo. Inzuzo ukuthi izinga lokuzenzekelayo liphakeme futhi i-torque yesivinini esiphansi inkulu; Okubi ukuthi intengo ye-inverter iphakeme kakhulu. Sicela ubheke ibhukwana lemiyalo yomkhiqizi ukuthola imininingwane yesondlo.
Iphampu ye-rotor inama-rotor ahlehlisiwe amabili (amazinyo ama-2-4).
Lapho zijikeleza, kukhona ukuncela (i-vacuum) okwenziwe endaweni yokungena ukuze kumunce izinto ezizothuthwa.
Ama-rotor amabili ahlukanisa ikamelo le-rotor laba yizicucu eziningana eziningana.
Esikhaleni, basebenza nge-oda a → b → c → d.
Lapho ngisebenza ukubeka i-a, ikamelo kuphela ngigcwele abezindaba;
Endaweni b, ingxenye yesilinganiso iboshwe egumbini B;
Esikhundleni c, okuphakathi nakho kufakwe egumbini A;
Esikhundleni d, Igumbi B neGumbi A lixhumana neChamber II, kanti abezindaba badluliselwa esikhumulweni sokukhishwa.
Ngale ndlela, okuphakathi (okokusebenza) kuthunyelwa ngokuqhubekayo.
Le mpompo ye-cam lobe iyiphampu yokudlulisa enezinhloso eziningi esebenzisa ama-lobe amabili, ama-tri-lobe, uvemvane noma i-rotor multilobe. Njengempompo yokulethwa kwe-volumetric sanitary, inezici zejubane eliphansi, i-torque ephezulu yokukhipha, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, njll. Isimiso saso sokusebenza esihlukile kanye nezici kufakwe ekudluliseni i-viscosity ephezulu, izinga lokushisa okuphezulu kanye nezinto ezonakalisayo. Inqubo yokuhambisa kwayo ibushelelezi futhi iyaqhubeka, futhi ingaqinisekisa ukuthi izakhiwo ezibonakalayo aziphulwa ngesikhathi senqubo yokudlulisa, futhi i-viscosity yezinto ezidluliswayo ingafika ku-1,000,000 CP.
Langaphambilini Isihlungi somoya
Olandelayo: Ithangi Lokukhipha Ikhofi
Zokuvala Pump Centrifugal
I-Sanitary Centrifugal Pump Baw
Impompo Yokucindezela Kokuhlanzeka
I-JM-F Split Colloid Mill (isitolo sikanxande)
Isendlalelo esisodwa se-Oval Top Mixing Tank
Isendlalelo Sokuxuba Ithafa elilodwa
Amatebhe Isizinda Tank